Al-Shabaab oo sheegteyn Masuuliyadda dilka Wariye C/casiis Afrika | Dayniile.com
Home Warkii Al-Shabaab oo sheegteyn Masuuliyadda dilka Wariye C/casiis Afrika
Al-Shabaab ayaa war kasoo saartay weerar ismiidaamin ah oo caawa ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo lagu dilay agaasimihii Radio Muqdisho Cabdi Casiis Maxamed Guuleed Africa.
Afhayeenka dhinaca howlgalada ee Al-shabaab Cabdicasiis Abuu Muscab ayaa xaqiijiyey iney ka dambeeyeen weerarkaas.
“Mujaahidiintu waxay caawa fiidkii fuliyeen weerar ka dhacay Magaalada Muqdisho. Weerarkaasoo ahaa camaliyad ishtish-haadi ah ayey la beegsadeen masuuliyiin uu ka mid yahay Cabdi Casiis Afrika” ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray afhayeenka.
Abuu Muscab ayaa intaas ku daray iney muddo dheer ku raad joogeen C/casiis Afrika.
“Cabdicasiis Afrika ayaa in muddo ah waxaa ku raad joogay Mujaahidiinta, isagoo loo haystay dambiyo dhawr ah oo uu ka galay Islaamka, iyo inuu ku lug lahaa dilal loo gaystay rag Mujaahidiin ah” ayuu intaas ku daray abuu Muscab.
Next articleCiidamada NISA oo howlgal ka sameeyay degaano ka tirsan Gedo
Galmudug Oo Qorshenyesa Dib u dajin Shacabkii Ka Barakacay Guriceel
Wasaaradda amniga Puntland oo joojisay isticmaalka gaadiidka hubka iyo ilaalada gaar...